Guyyaa har'aa akka guyyaa jalalleetti kabajjanii beektuu? attamiin? - BBC News Afaan Oromoo
Guyyaa har'aa akka guyyaa jalalleetti kabajjanii beektuu? attamiin?
Aadaafi dudhaa biyya keenyaatiin gaa'ilaan dura jaalalleewwan alaalatti ija hanaatiin wal ilaalaa, yoo danda'ame ammoo karaa nama biraatiin jaalachu ibasama ture. Har'a garuu haalli akkanaa kun keessattu naannoo magaalaatti waan geedaramaa dhufee fakkaata.
Jaalalleewwan ykn kanneen gaa'ilaaf wal kaadhimatan, guyyaafi taatee adda addaa sababeefachuun kennaa waliif kennu. Keessttu haalli kun magaalaa Finfinnee keessatti bal'inaan mulata.
Guyyaa har'aa yoo itti dhiiyaachaa dhufuun suuqiiwwanis meeshaalee kennaa jaalalleewwan walii kennaniin guutuamu. Daraaraa, kennaawwan akka fakkii onnee qabaniifi kkf baayyinaan mul'atu.
Akkasumas hoteeloonni, manneen nyaataafi keekii qophii qabaniin guyyichaaf miira addaa keenuuf yaalu.
Guyyaa har'aatiinis uffannaa diimaafi gurraacha uffachuun kennaa daraaraafi chakoleetii walii kennuun kabajatu jaalalleewwan. Aadaan kunis kan warra Awuroppaa irraa fudhatame yoo ta'u, tibbana magaaloota keessatti dhimma dargaggoon irratti dubbatan ta'aa dhufaa jira.
Bara abbootii angafaatti hoo?
Aaddee Masaluu Mazilaqiyaa nama umuriin waggaa 62tti. Kan jiraatanis magaalaa Dire Dawaati. Haala bara isaanii turees, '' guyyicha kabajuu dhiisitii gonkumaa maqaa isaatu hinbeekun ture. Bara sana waa'ee jaalalaa yaaduun mataasaa akka yakkaatti ilaalama ture. Siriiyyuu waa'ee jaalalaa yaaduuf yeroo osoo hinargatiin gara gaa'ilaa gallee,'' jechuun bara isaanii ibsu.
Lafa shubbisaa deemuun ammoo caalaa yakka ture. ''Amma garuu haala jiruun kan ka'e magaalattiin baayyee haala qabannaa'aa keessatti kan argamtu yoo ta'u, guyyicha kabajuun badaa natti hinfakkaatu. Mucaan kiyyaa haadha mana mucaa tokko waliin godhataniin adda bahan illeen guyaa har'aa kanatti waggaan al tokko walarguu waan ta'eef baayyeen gammada,'' jedhaniiru.
Aaddee Tsagaa Balaayi dubartii waggaa 56 yoo ta'an, abbaa warraa isaanii obboo Tawusom Gabree waggaa 34'f waliin jiraatan jiraataniiru. Waa'ee guyyaa jaallalleewwan kana dhagahanii akka hinbeekne dubbatu. Bara isaanittis guyyaan jaallalleef ramadamee jiraachu baatulleen, gaa'ila isaanitti baayyee gammachuu akka jiraatan dubbatu.
Abbaan warraa isaanii Obbo Tawusom jalallii guyyaa hunduma kabajni kennamuufi qabaata jedhaniiru.
Dargaggoon bara kanaa maal jedhuu?
Shamarreen waggaa 30 Misikir Taarikuu erga jaallallee ishee Miikaa'eel G/Amlaak waliin walbartee kaaftee, erga walifuudhanii boodas guyyaa jaalalleewwanii kan kabajan ta'u dubbatti. ''Waan guddaa miti, gadi baanee waliin irbaata erga nyaannee booda daraaraa walii kennuun jaalala walii qabnu walitti himna,'' jechuun ibsiti.
Akkasumas guyyaa kana akka jaalattuufi garuu namoonni waljaalatanis guyyaa hundaafi haala argatan hundaan jaalala walii qaban waliif ibsuun barbaacisaadhas jette jirti.
Karaa gama biraatiinis dargaggoon guyyaa kana hinkabjne dubbifeera. Shamarreen maqaashee himachuu hin barbaannee tunis ''Ani jaallalleewwan jaalala waliiqaban waliif ibsachuuf guyyaa kana qofati murtaa'u qabu jedhee hinamanu. Kanarra guyyichi waan qalbii dubartootaa harkisu ittiin gurgurachuu itti yaadamee kan umamee jedhee waanan yaaduuf kabaju hinbarbaadu'' jette jirti.
Mihirat Iqubaay ammoo shamarree tanaan haala aada ta'ee guyyicha akka kabju dubbatti. ''Yeroo jalqabaatiif waggaa jahaan haraatti 'sochii 'waraaqsa Keello' jedhamuun kan eegalle. Kunis rakkoolee shamarran baadiyyaa irraa yunivarsitii dhufan qaban guutuuf sochii eegalameedha. Shamarran baadiyaa dhufan waan ji'atti ittiin qulqullinsa isaani eegatan bitachuu rakkoo maallaqaa kan qabaniidha. Yeroon kunis yeroo manni barnootaa boqoonnaarra jiru waan ta'eef, shamarran kanneen gargaaruuf jecha guyyaa jaalalleewwanii kanarratti daraaraa gurguruu eegalle.
Isaan boodas dhaabbilee daraaraa omisha waggaa waggaan bilisaan waan nuuf kennaniifuu barattoota hedduu gargaaru dandeenyee jirra. Bara darbe qofatti gara qarshii kuma 30 arganneera'', jetteti.
Guyyaa jaalalleewwanii sababeefachuu hojiin hojataman maal fakkaatu?
Manneen nyaataafi hoteeloonni guyyaa jallalleewwanii sababeefachuun waan hundarratti gatii akka dabalan dubbatu namoonni tokko tokko. Hoteeloota kabajni ayyaana jaalalleewwanii itti gaggeefamu keessa tokko kan ta'ee hoteelli Shaaratan Addis. Qindeessituun gabaafi gurgurtaa hotelichaa Salaamaawiit Adaana, hotelichi erga hojiisaa eegalee kaasee guyyaa jaalalleewwniif qophii addaa akka qabu dubbatti. Guyyaa sanattis namoota caalmaa qaban akka keessumeessaniifi lammiilee Itophiyaa dhaqanis dhiheenya kana dabalaa jiraachu dubbatti.
Image copyright Neil Curry
Qannaan Mannaayee erga omisha abaaboo irratti hirmaachu eegalee waggoota 11 lakkoofsiseera. Hojattuun dhaabbatichaa Maahidaris gurgurtaan guyyaa jaalalleewwan kan waggaa %75n caalmaa akka qabu dubbatti. 'Guyyaa sanatti ababoo diimaan baayyee barbaadama. Kanneen nurraa bitan keessaa biyyi Neezarlaand dursa yoo taatu, yero hundaa guyyaa kanatti gurgurtaan keenya olaanaadha'' jette jirti.
Erga waggoota sadan darbanii asii garuu biyya keessattif baayyee barbaadamaa dhufuufi dhaabbilee tola oltotaatiif akka kennaatti abaaboo dhiyyeessa jiraachulleen dubbatte jirti.
Paartiin Badhaadhummaa Afaan Oromoo afaan hojiisaa taasisuun ragaasise
'Qubattootni Israa'eel West Baanki keessaa seeran ala miti'